अर्थ / वाणिज्य > बजार
खाद्य संस्थानले बेच्ने खसीबोका र च्याङ्ग्राको मूल्य तय, च्याङ्ग्रा किलोको ६७५ र खसीको ४५५ रुपैयाँ
बिहिबार, असोज ५, २०७४ काठमाडौं। नेपाल खाद्य संस्थानले बेच्ने खसीबोका र च्याङ्ग्राको मूल्य निर्धारण गरेको छ। संस्थानको बुधवार बसेको संचालक समिति बैठकले खसोबोका र च्याङग्राको मूल्य निर्धारण गरेको हो।संस्थानले निजी व्यवसायीले बिक्री ...
२२ भाद्र, २०७४ काठमाडौं।दरबारमार्ग विकास बोर्डले उपभोक्ता ठगी गरेको आरोपमा सिलबन्दी गरिएका पसललार्इ क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गर्दै अनिश्चितकालका लागि पसल बन्दको निर्णय गरेको छ। बोर्डले गलत नियतले दरबारमार्गका ...
यसपालिको दसै महँगो
भदौ १६, २०७४ तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामान ढुवानीका लागि प्रयोग हुने भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट बारम्बार सास्ती बेहोर्दै आएका आयातकर्ताको समस्या झन् बढ्दै गएको छ । यसले नेपाली आयातकर्ता मारमा परेका ...
कात्तिक पछि खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुने चेतावनी
११ भदौ, काठमाडौं । व्यवसायीले आगामी कात्तिक (नोभेम्बर) पछि खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुने चेतावनी दिएका छन् । आगामी नोभेम्बरपछि नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट सञ्चालन गर्ने पूर्वसहमति ...
भदौ १, २०७४ काठमाडौं–सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले दुधको मुल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढाएको छ । डीडीसीले निर्धारण गरेको नयाँ मुल्य अनुसार बिहीबारदेखि दुधको मुल्य प्रतिलिटर ७० रुपैयाँ पुगेको ...
वार्इवार्इले भारतको मार्की अवार्ड पायो, भारतीय बजारमा वार्इवार्इको बजार हिस्सा २७ प्रतिशत
साउन ३०, २०७४ काठमाडौं।वाईवाई चाउचाउले भारतको ख्यातीप्राप्त ‘मार्की अवार्ड २०१७’प्राप्त गरेको छ मुम्बर्इ मादी एडभरटाईजिङ क्लबद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय वस्त्र, सूचना एवं प्रसारण मन्त्री स्मृती इरानीले अवार्ड सिजीकर्प ...
२6 श्रावण २०७४, काठमाण्डौ । अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच बढ्दो तनावका कारण सुनको भाउ उच्च दरले बढ्न थालेको छ । यी दुुई देशबीचको तनावले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण बिग्रिएको र यसको ...
जारको पानीमा बेइमानी : कम्पनीको यस्तो लापरबाही
२५ श्रावण २०७४, काठमाडौंको जारको पानी भरिने स्थानमा प्रशस्तै अखाद्य सामाग्रीहरु भेटिएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । सरकारी निकायबाट अनुसन्धानका क्रममा यस्तो अवस्था पाइएको हो । पानी उत्पादन हुने क्षेत्रहरु नै ...
२५ श्रावण २०७४, -चन्द्रकान्त खनाल रुपन्देही। पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम व्यावसायीले पेट्रोलियम पदार्थ खरीद नगर्ने घोषणा गरेका छन्। आयल निगमले तोकिएको परिमाणको तेल नदिएको भन्दै विहिबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ खरीद नगर्ने भएको हो।पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स ...
चाडपर्वमा चिनी, नुन र खाद्यान्नमा छुट
२२ श्रावण २०७४, काठमाडौंः सरकारले आउँदो चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन अढाई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलबध गराउने लक्ष्यका साथ यो बजेट ...
आयल निगमको जग्गा खरीद टेण्डर रद्ध
१९ श्रावण २०७४,काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले कैलाललीमा जग्गा खरिद नगरी टेन्डर रद्द गरेको छ । डिपोका लागि उपयुक्त ठाउँमा राम्रो जग्गाको टेन्डर पर्दा पनि निगम केन्द्रीय कार्यालयले टेन्डर रद्द गरेको ...
तपाईँको टिभी, फ्रिज बिग्रियो? प्लम्बीङ र बिजुली जोड्नुपर्‍यो? लिनुहोस् सजिलो मर्मत सेवा+
१३ श्रावण २०७४,काठमाडौं । सहरको कोलाहाल त्यसमा ट्राफिक जाम घरमा टिभी होसा वा फ्रिज बिग्रिएमा वा त्यस्तै अन्य गाह्रौ घरायसी सामग्री बिग्रिएमा मर्मत केन्द्रसम्म लैजाने झन्झट हुन्छ। तर अब ...
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा उनन्तिस वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान
१० श्रावण २०७४,मंगलवार । काठमाडौं– नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा २९ वस्तुलाई गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रदान गरेको छ । विभागबाट नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्राप्त गर्ने ...
घरजग्गा किनबेचको पारो उकालोमा, राज्यको ढुकुटीमा दोब्बर राजस्व दोब्बर
०९ श्रावण २०७४,काठमाडौं । - अमर बडुवाल काठमाडौं।सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ घरजग्गा किनबेचबाट मात्रै २० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ। यो अघिल्लो वर्ष भन्दा आठ अर्ब ...
विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा भोलीदेखि क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आउने, उपभोक्तालार्इ चर्को शुल्क
२०७४ आषाढ ३१ शनिबार,काठमाडौं । काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड व्यवस्था लागू गर्दैछ। सरकारले विज्ञापनरहित नीति २०७३ मा गरेको व्यवस्था ...
एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुल गर्न पुनः सचेत
२०७४ अषाढ २९,काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २ महिनाभित्र एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारलाई पुनः सचेत गराएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुल गर्न ...
२०७४ अषाढ २८,काठमाडौं । तपाईंले एउटा जिन्सको पाइन्ट किन्नु पर्‍यो भने कति मूल्यसम्म तिर्नुहुन्छ? तपाईंले सहजै मूल्यको अन्दाज गर्न सक्नुहुन्न, बरु पाइन्टको गुणस्तर, ब्राण्ड र किन्ने ठाउँसम्मलाई सम्झिनुहुन्छ। जति सम्झिए पनि, ...
२०७४ अषाढ २७,काठमाडौं । नेपाल एउटा हुर्कदैं गरेको अर्थतन्त्र हो । जसलाई बिकासोन्मूख देश भन्न पनि अलि गाह्रै पर्छ । त्यसैले यहाँ समृद्धि प्राप्त गर्न निकै गाह्रो र सजिलो दुवै ...
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर दुई रुपैयाँ, ग्यासमा २५ भाउ घट्यो
अषाढ १८, २०७४ काठमाडौं । ग्यासको मूल्य पनि २५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर घटाइएको छ। अब ग्यासको मूल्य १३ सय ५० पर्नेछ।निगमका प्रवक्ता सिताराम पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा मूल्य घटेकोले यहाँ पेट्रोलियम ...
राजमार्गका होटल सञ्चालकबाट मनपरी दुव्र्यवहार
अषाढ १८, २०७४ काठमाडौं । धादिङ – एक त कलंकी–नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डमा घन्टौं जाम, त्यसमाथि राजमार्गका होटलमा सडेगलेका खाना । गुनासो गर्दा होटल सञ्चालकबाट उल्टै दुव्र्यवहार । होटल सञ्चालकहरुले असुल्ने ...